Wararka - Ururinta Wax soosaarka TPU Biodegradable
Alaabada Birta ah
Calaamadaha Gawaarida Gawaarida & Calaamadaha Gawaarida
Cufflinks & Baararka isku xidhka
Shaambadaha Lapel & Calaamadaha Pin
Billadaha & Billadaha
Dawaarka & Duubka
Balastar daabac leh
Balastarrada la jeexjeexay
Calaamadaha Dharka leh ee Dharka
Tilmaamaha Keydhka & Dahaarka leh
Balastarrada PVC Dhex-dhexaad ah
Bullion Blastes iyo calaamadaha
Waxyaabaha Kale ee Dharka Gaarka ah
Xadhig Ey & Collar
Suunka Shandada & Suunka
Jumlada Badbaadada & Paracord
Keychains PVC jilicsan
Daboolida Key Key PVC
Furitaanka Dhalada PVC ee jilicsan
Mashiinka Sawirka PVC ee jilicsan
Xarkaha Gacmaha & Jijimooyinka PVC oo jilicsan
Jilicsan PVC Cable Winders
Kabaro PVC jilicsan
Calaamadaha Shandadaha PVC ee jilicsan
Jiid jiingado jiinyeer PVC
Calaamadaha Biinanka jilicsan ee PVC
Jilicsan PVC Qaboojiyaha Magnet
USB USB jilicsan
Qalabka jilicsan ee qalinka PVC
Billadaha jilicsan ee PVC
PVC jilicsan kuwa kale
Jijin Silicone iyo Xargaha
Xaaladaha Taleefanka Silicone
Qadaadiicyada silikoon-ka ah iyo boorsooyinka silikoon
Daboolka Daboolka Silicone Cup
Kuwa Kaarka Silicone haysta
Koobab Isku-laabashada Silikoonka
Alaabada Jikada Silicone
Kuwa kale silikoon
Dajisaa Qalabka xafiisyada
Xusuusin & Xusuusin Xusuusin
Qaanadaha qalinka & Kiisaska Qalinka
Taleefoonka Taagan & Kuwa Haysta Kaarka
Taleefanka Ka Hor-tagga Suufiyada Mat
Suunka Telefoonka Dib u Laabo
Waxyaabaha Xayeysiinta ah
Kuwa Cabbayaasha Neoprene
Fureyaal maqaar & Feejooyin muhiim ah
Ciyaaraha Hal abuurka
Waxyaabaha Xayeysiinta Alwaaxda ah
Qurxinta loo yaqaan 'Acrylic', Tags iyo Kuwa kale
Xirmo iyo Qalab
Lanyard & Sharooto
Waxyaabaha Kale ee Xayeysiinta ah
Aruurinta Wax soosaarka TPU Biodegradable
Waxaan nahay xirfadle qeybiyaha alaabada xusuusta birta, jilbaha iyo calaamadaha, biladaha, qadaadiicyada tartamaya, furayaasha furayaasha, calaamadaha booliska, daabacaadda & balastarrada la duubay, lanyard, qalabka telefoonka, koofiyadaha, qalabka xafiisyada iyo waxyaabaha kale ee xayeysiinta ah.
Waad ku mahadsantahay taageerada wershadaha leh goobta wax soosaarka oo ka badan 64,000 mitir murabac ah iyo in ka badan 2500 shaqaale khibrad leh oo lagu daray warshad elektroonikayntii ugu dambeysay ee tooska ah iyo makiinado jilicsan oo midab dhalaalaya, waxaan ka sarreynnaa tartamayaashayada waxtarka sare, takhasuska leh, daacadnimada iyo tayada wax soo saar aad u fiican, gaar ahaan tiro badan oo loo baahan yahay wax yar ama naqshado adag oo loo baahan yahay shaqaale khibrad leh. U heellan xakamaynta tayada adag iyo adeegga macmiilka oo laga fiirsado, xubnaheenna khibradda leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka wada hadlaan shuruudahaaga ayna hubiyaan qanacsanaanta macaamiisha oo buuxda.
Xor ayaad u tahay inaad u soo dirto naqshadeyntaada tilmaamaha annaga, Dongguan Pretty Shiny Gifts Co., Ltd. waa ishaada tayada, qiimaha, iyo adeegga.
Waxaa laga yaabaa inaad ogaato inay ka sii kululaaneyso & ka sii kululaaneyso xagaaga, qabow & qabow jiilaalka. Ilaalinta deegaanka ayaa noqonaysa mid lama huraan ah. Iyada oo ay weheliyaan dadka codsashada ilaalinta deegaanka ee sare & sare, si waafaqsan, walxaha noqon kara nooleynta waa isbeddel. Kuwaas mooyeelanyar yar oo deegaanka ku habboon, caws jajabin kara PLA, warqadaha caanaha lagu cabo, qamadiga qamadiga qado daboolka alwaaxa & xargaha furahaiwm, Haddiyadaha Bilicsan ee Bilicsan ayaa ah alaab-qeybiyaha saxda ah ee macaamiishayada u siiya wax soo saarka noolaha TPU oo baaba’ayn kara. U hibeynta dadaalkeena xaddidan ilaalinta deegaanka, iyo wadajir dhul wanaagsan.
Waxyaabaha TPU waa shey bey'adeed u fiican oo la duleyn karo. Waa mid jilicsan, adkeysi leh oo wasakh u adkaysta. Qalabkan la baabi'in karo waxaa loo isticmaali karaa badeecadaheena kala duwan sida sumadaha tolida,magnets qaboojiyaha, sumadaha furaha, kiisaska telefoonada, masaxa shaashadda, soojiidashada taleefanka, shandadaha boorsooyinka, kuwa haysta kaarka iyo wixii la mid ah. Calaamado kala duwan oo hal abuur leh ayaa lagu sameyn karaa TPU, sida daabacaadda silkscreen, daabacaadda dejinta, lenticular, glittering, milicsiga, dareeraha dhalaalaya iyo wixii la mid ah. Alaabadayada TPU-da ee Eco-Friendly Friendly waa kuwo ku habboon kor u qaadista, xayeysiinta, aruurinta, hadiyadda, gaarsiinta xalalka aqoonsiga IWM. Suuqa oo dhami wuxuu noqon doonaa mid cajaa'ib leh oo ku saabsan alaabta noo baaba'aysa & qaabkaaga soo jiidashada leh
Awoodaha TPU: wax baabi'in kara, dabacsan, adkeysi leh oo wasakh u adkeysanaya
Astaamaha Custom: dhaldhalaalka, milicsiga, daabacaadda lenticular, dareeraha dhalaalaya, daabacaadda silkscreen, daabacaadda qaybta iwm
MOQ: 500pcs / naqshad
Inaad xiiseyneyso oo aad rabto inaad soo saarto alaabada TPU oo leh astaan ​​kuu gaar ah oo loogu talagalay waxqabadkaaga xiga? Fadlan kaliya kala tali sheyga dukaankeena internetka ama buugga weyn, noo soo dir astaantaada ama nashqaddaada oo ay la socoto tusaalaha iyo qaabka aad dooratay. Waxaan kuu soo diri doonnaa macluumaad qiimeyn ah iyo sawir caddeyn ah oo ku saleysan naqshaddaada adoo adeegsanaya emayl. Mar alla markii aad oggolaato caddaynta oo aad soo gudbiso lacag bixinta, waxaannu qaabayn doonnaa naqshaddaada oo aannu kuu soo diri doonnaa.
Waqtiga boostada: Jul-21-2021
Cinwaanka: Qolka 101, Dhismaha 1, Maya. 26 Xiansha Xingguang Road, GaoBu Town, DongGuan City, Gobolka GuangDong, Shiinaha